दाङमा विस्तार हुँदैछ, कागती खेती - Naya Sanchar
सरकारले दाङमा कागती खेती विस्तार गर्ने भएपछि किसानहरू झनै खुशी भएका छन्
२१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १२:३०
दाङ । कुनै समय बाँझो जग्गा थियो, तर अहिले हरियाली छ । सबैतिर कागतीका बोटैबोट देखिन्छन् । बोटैपिच्छे लटरम्म फलेका मुखै रसाउने कागती । त्यहीँ कागती अवलोकन गर्नेहरूको उत्तिकै भीड पनि ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ विजौरीमा डेढ बिघा र घोराहीमा चार बिघा क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर दुई युवाले गरेको कागती खेती उदाहरणीय छ । ती स्थान अहिले कागती खेतीले परिचित बनेका छन् ।
घोराहीमा वार्षिक रु. ३ हजार कठ्ठा र तुलसीपुरमा रु. २ हजार ५०० जग्गा भाडामा लिएर रुकुम घर भई हाल दाङमा बसोबास गर्दै आएका विष्णु वली र रामचन्द्र खड्काले व्यावसायिक कागती खेती गर्नुभएको हो । धेरै युवा विदेश पलायन भएका छन् । तर नेपालमै पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
उहाँहरूले सूर्य जैविक कृषि केन्द्र प्रालिमार्फत कागती खेती सुरू गरेको तीन वर्ष भयो । खेती सुरू गरेको डेढ वर्षदेखि आम्दानी लिन सुरू गरेका उहाँहरूले वार्षिक रु. १५/२० लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने गर्नुभएको छ । “डेढ वर्षदेखि हामीले आम्दानी लिन सुरू गरेका हौँ”, वलीले भन्नुभयो “वार्षिक रु. १५/२० लाख आम्दानी हुने गरेको छ ।”
कागतीको बजार माग पनि उच्च रहेकाले समयमै लगाानी उठाउन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरूमा आफूहरूले रु. ३० लाख लगानी गरेको भए पनि अहिलेसम्म करिब रु. १ करोड लगानी भइसकेको छ ।
अहिले ‘पन्त १’ कागतीको खेती भइरहेको छ । कागती अचार, जुस, जामलगायतका लागि बढी माग हुने गरेको अर्का व्यवसायी खड्काले बताउनुभयो । “कागती बजारमा निकै माग छ, अहिले बजारको मागअनुसार पुर्याउन भ्याइनभ्याइ छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बढी मात्रामा अचार, जुस, जामलगायतका लागि माग हुने गरेको छ ।”
सरकारले दाङमा कागती खेती विस्तार गर्ने
सरकारले दाङमा कागती खेती विस्तार गर्ने भएपछि आफूहरू झनै खुशी भएको उहाँले बताउनुभयो । यसले व्यावसायिकरूपमा कागती खेती गरिरहेका किसानलाई थप प्रोत्साहन गरेको उहाँको भनाइ छ । अहिले दाङका दुई स्थानमा आफूहरूले यो खेती गरेको भन्दै यसलाई विस्तार गरेर दैशभर खेती गर्ने वातावरण तयार गर्न थालिएको व्यवसायी वलीले बताउनुभयो ।
अहिले हामी दुई छौँ, हामीले देशैभर यो खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि १०८ किसान थप गर्ने हाम्रो योजना छ ।” उहाँका अनुसार आफूले उत्पादन गरेको कागती देशभर पुर्याउने योजना छ ।
अहिले कागती फलाउने र बेच्ने कार्य मात्रै भएको भन्दै कागती प्रशोधन गर्ने र बजारीकरण गर्ने तयारी थालिएको उहाँको भनाइ छ । आफूहरूले बिरुवा पनि उत्पादन गरिरहेको भन्दै आउँदो वर्ष ५० हजार बिरुवा बेच्ने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ । एउटा बिरुवाको फुटकरमा रु. २५० मा बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
Tags: # कागती खेति, कृषि
ओखलढुङ्गामा फौजी किराको फैलावटले किसान समस्यामा